Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် | Gadget သတင်း
Rafa Rodriguez Ballesteros | | ယေဘုယျ
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား သုံးသပ်ချက်အသစ်တစ်ခုကို ပေးဆောင်လာပါသည်။ အသံနှင့် ဂီတသည် ဇာတ်ဆောင်များဖြစ်သည်။. သုံးသပ်ချက်တစ်ခု Trosmartတစ်ဖန်၊ သူသည် ကျယ်ပြောလှသော ကတ်တလောက်တွင် ထည့်ရန် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ကျွန်ုပ်တို့ကို ယူဆောင်လာသည်။ ဒီနေ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာကမ်းလှမ်းစရာများစွာပါရှိသော အားကောင်းပြီး ကျစ်လစ်သောစပီကာ။
သင်ဟာ ဂီတကို အပြည့်အ၀ နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ပါ။ သံယောဇဉ်ကိုလည်း မကျေနပ်ရင်လည်း လက်ခံပါတယ်။ သင်၏စပီကာ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် သင့်ထံအမီလိုက်နိုင်စေရန်အတွက် အရေးကြီးပါက၊ Tronsmart Studio သည် သင်ရှာဖွေနေသောစပီကာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
1 Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ၊ သင်လိုအပ်သည့်အရာ
2 Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ဒီဇိုင်း
3 Tronsmart Studio ဖြင့် ခေတ်မီနည်းပညာ
5 Tronsmart Studio Speaker ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ၊ သင်လိုအပ်သည့်အရာ
အသံနှင့်သက်ဆိုင်သော စပီကာများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအများအပြားကို Actualidad Gadget တွင် ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။ အတိအကျ, ဘလူးတုသ်စပီကာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတကိုခံစားရန်စံပြ သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးနည်းလမ်းကို နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပါ၊ သင့်လျော်သောအစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ဒါပါပဲ။
ဒါပေမယ့် စပီကာတိုင်းက ဒီလိုအဆင့်မျိုးကို မပေးပါဘူး။ အသံအရည်အသွေးနှင့် ပါဝါသည် ဤကဲ့သို့သော ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားနှင့် ဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။. အိမ်တွင် နေရာလွတ်သည် အရေးကြီးသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဂီတကို ဘယ်သွားသွား ယူဆောင်သွားကာ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည့်ပုံစံအတိုင်း အသံရှိစေရန် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။
Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာသည် စျေးကွက်တွင် ကိန်းဂဏန်းများကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် အနိုင်ရရှိသည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကြားတွင် ကြီးမားသောမျှတမှုရှိသည်။ ကမ်းလှမ်းသည်။ သင့်ရုံးခန်း၊ သင့်အိမ်အတွက် သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် စပီကာတစ်လုံးကို သင်ရှာဖွေနေပါက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်အကြံပြုထားသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒီမှာ အခုပဲ ဝယ်လို့ရတယ်။ Tronsmart စတူဒီယို သင်ထင်ထက်လျော့နည်းသည်။
Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ဒီဇိုင်း
ထိုသို့မှန် ဒီဇိုင်းက မျက်စိကျစရာ စျေးကွက်ထဲမှာ စပီကာတွေရှိတယ်။ သာမန်မျက်စိ။ စပီကာများသည် လုပ်ငန်းသုံးနည်းပညာသုံး စက်များထက် အလှဆင်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပိုမိုဖန်တီးထားသည်။ Tronsmart Studio Wireless Speaker ဖြစ်ပါ သည်။ အသံချဲ့စက်နှင့်တူသော စပီကာ တကယ်ပဲ၊ အားလုံးထက်၊ အသံက တကယ့်စပီကာနဲ့တူတယ်။.
ငါတို့တွေ့တယ် စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်းမျဉ်းဖြောင့်နှင့် အနက်ရောင်။ စပီကာတို့နဲ့ desktop ဖော်မတ် ၎င်းသည် မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆို လိုက်ဖက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စတူဒီယိုစပီကာဟောင်းများကို အမှတ်ရစေသော်လည်း အနက်ရောင်အရောင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများကြောင့် ခေတ်မီမှုအနည်းငယ်ဖြင့် ထိတွေ့မှုရှိသည်။
ဒါဟာရှိပါတယ် မာကျောသော အလူမီနီယမ် ကိုယ်ထည် အဲဒါက မင်းကို ကြော့ရှင်းတဲ့ ရုပ်တုကို ပေးတဲ့အပြင်၊ မြင့်မားသောသစ္စာရှိမှုနှင့်အတူဆုံးရှုံးမှုမရှိပါ။. နားထောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကို အမှန်တကယ် စိတ်ကျေနပ်စေမည့် အရာတစ်ခု။
ကိုင်လိုက်ပါ။ Tronsmart စတူဒီယို အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာအမေဇုံပေါ်မှာ
ထဲမှာ ထိပ်ဆုံး ငါတို့တွေ့ပြီ ခလုတ်ထိန်းချုပ်မှု ပြီးပြည့်စုံသောဗဟိုပြုရာဘာပြားပေါ်တွင်။ ငါတို့မှာ ခလုတ်ရှိတယ်။ စွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်နှင့် လျှော့ချရန် အသံအတိုးအကျယ် မျိုးပွားခြင်း၊ ဆော့ကစား / ခေတ္တရပ်နားသည်. ခလုတ်လည်း ရှိတယ်။ bluetooth ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာဖြင့်။ ပြီးတော့ နောက်ထပ်လုပ်မယ့် ခလုတ်နှစ်ခု၊ ငါတို့ကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့ တစ်ခု အသံလက်ထောက်, နှင့်အခြား activated Sound Pulse နည်းပညာ နောက်လာမည့်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။
ထဲမှာ အောက်ခြေ ငါတို့တစ်ခုတွေ့တယ် အထောက်အပံကိုလည်း ရော်ဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။. စက်ပစ္စည်းသည် ၎င်းပေါ်တွင် လုံးဝရပ်နေပြီး အလွန်ပြေပြစ်သောပုံစံဖြင့် အနည်းငယ်မြင့်နေပါသည်။ ဤရာဘာသည် ချော်လဲခြင်းလည်းဖြစ်၊ ဒါတွေအားလုံးထက် တုန်ခါမှုများကို ရှောင်ရှားရန် မြင့်မားသောအသံကိုအသုံးပြုသောအခါ စားပွဲတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သည်။
ထဲမှာ နောက်ဘက် ငါတို့တွေ့ပြီ port ကိုတင်, ပုံစံနှင့်အတူ USB အမျိုးအစား C၊ ၎င်းသည် အမြန်အားသွင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ နောက်ပြီးတော့ 3,5mm jack ကို input ကို ဘလူးတုသ်မပါဘဲ စက်ပစ္စည်းအချို့ကို ချိတ်ဆက်ရန်။ တဦးနှင့်တဦး Micro SD မန်မိုရီကတ် အပေါက် ဘလူးတုသ် သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးများမပါဘဲ ဖွင့်ရန်အတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသော သီချင်းအားလုံးကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Tronsmart Studio ဖြင့် ခေတ်မီနည်းပညာ
စပီကာတစ်လုံးဝယ်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ၊ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ စွမ်းအားက အရမ်းအရေးကြီးပြီး အဲဒါက အများအားဖြင့် အရင်ဆုံးကြည့်တဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ သို့သော် ဤပါဝါသည် အသံအရည်အသွေးနှင့် မကြာခဏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Tronsmart သည် ဤစပီကာအသေးစားကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် အသိဉာဏ်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ပါဝါ 30 W ထက်မနည်း ပြီးတော့ သူတို့ အသံထွက်တယ်။ တကယ်ကို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးပါ။.
သီးသန့် Sound Pulse နည်းပညာ ၎င်းသည် နားထောင်မှုအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ပေးသည် ပုံမမှန်သော အသံထွက်အား အသံအတိုးအကျယ်မခွဲခြားဘဲ။ Tronsmart Studio သည် ကုမ္ပဏီကို စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ပထမဆုံးကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်သည်။ TuneConn နည်းပညာ၊ ကျေးဇူး ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်တစ်ခုတည်းသို့ စပီကာ ၁၀၀ အထိ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။… အရူး။ သင်ယခုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ Tronsmart စတူဒီယို အခမဲ့ရေကြောင်းနှင့်အတူအမေဇုံပေါ်မှာ။
El 2.1 ချန်နယ်များပါရှိသော တက်ကြွသောအသံ သတိမပြုမိပါဘူး။ ကျေးဇူးပါ။ tronsmart အက်ပ် ကွဲပြားခြားနားသောဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဆက်တင်များ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်း နှင့် သင်စိတ်ကူးနိုင်သမျှသော အသံသက်ရောက်မှုများ။ အက်ပ်လီကေးရှင်းကို အသုံးပြုခြင်းအတွေ့အကြုံသည် အရည်အသွေးနှင့် အသံသည် သင်အမြဲလိုချင်သည့်အရာနှင့် ပိုမိုနီးစပ်ပါသည်။
ရေးသားသူ: Geekbuy Inc.
La ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ၎င်းသည် Studio Wirels Speaker ၏ ခိုင်မာသောအချက်လည်းဖြစ်သည်။ သင့်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 2000 mAh ဘက်ထရီ နှစ်လုံး ကိုင်နိုင်သည် 15 နာရီအထိ အနှောက်အယှက်ကင်းစွာ ဖွင့်နိုင်သည်။. အမြန်အားသွင်းနည်းပညာကြောင့် သုံးနာရီအတွင်း 100% ဘက်ထရီကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဲဒါကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြတယ်။ ရေစိုခံ မင်းမှာ ကျေးဇူးရှိတယ်။ IPX4 လက်မှတ်. ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် ဦးစားပေးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကို indoor speaker အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ခံနိုင်ရည်အားက ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
Tronsmart Studio တွင် အသံချဲ့စက် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းနည်းပါးသော စင်တာအောက်ဝူးဖာ ၁ ခု, Passive စပီကာ ၄ လုံး နက်နဲသော ဘေ့စ်နှင့် ပါဝါတို့ကို ပေးစွမ်းသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် တွစ်တာ ၂ ခု. ဤစျေးနှုန်းအကွာအဝေးတွင်ရွေ့လျားနေသောစျေးကွက်ရှိစပီကာအနည်းငယ်သည်၎င်းကဲ့သို့မည်သည့်အရာကိုမဆိုပေးဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။
ပုံစံ Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ
ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 5.0 + 3.5 + Micro SD ပေါက်
ကြိမ်နှုန်း 20 Hz - 20000 Hz
ဘက်ထရီ2x ကို 2000 mAh
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး 15 နာရီတိုငျအောငျ
အချိန်အားသွင်းသည် ၃ - ၅ နာရီ
ရှုထောင့် 206.5 70 58 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 0.961 ကီလိုဂရမ်
ဝယ်ယူ link ကို Tronsmart စတူဒီယို
စြေး 79.99 €
Tronsmart Studio Speaker ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
TuneConn နည်းပညာ စပီကာ 100 အထိ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းသို့ ချိတ်ဆက်ရန်။
30W ပါဝါ ထိုကဲ့သို့သော compact device တွင်။
15 နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တစ်ခုတည်းတာဝန်ခံပေါ်မှာ။
အသံအရည်အသွေး မည်သည့် volume တွင် ပုံပျက်ခြင်း မရှိပါ။
Tule Conn နည်းပညာ
El သတ္တုကိုယ်ထည် ပြုတ်ကျခြင်းကြောင့် ပွန်းပဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်သွားနိုင်သည်။
အလေးချိန်မြင့်သည် de 1 ကီလိုဂရမ်နီးပါး
Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Tronsmart Studio ကြိုးမဲ့စပီကာ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
ယခု WiFi6နှင့် HDR ပါရှိသော Amazon Fire TV Stick Max